४० कटेपछिको बैवाहिक जीवन निरस लाग्दैछ, यस्तो गर्नुस् – Health Post Nepal
२०७७ पुष २१ गते ७:३१
बैवाहिक जीवनमा लामो समय वित्दै जाँदा कतिपय मानिसले सम्बन्धमा दुरी पैदा भइरहेको महशुस गर्छन्। खास गरेर ४० को उमेर कटेपछि त्यस्ता व्यक्तिमा जीवनमा कुनै उत्साह नै नबचेको महशुस हुनथाल्छ।
यस्तो हुनुको प्रमुख कारण भनेको लामो समयदेखि एक अर्कालाई समय दिन नसक्नु हुनसक्छ। जीवन व्यस्ततामा अल्झिएको छ भन्दैमा सधै त्यसैमा रुमलिराख्नु हुँदैन। कहिले काही परिवारका लागि पनि समय निकाल्नुपर्छ। जसले गर्दा श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध प्रेमिल बनिरहोस्।
आफ्नो ख्याल गर्ने
याद गर्नुस् त तपाई आफ्नो पार्टनरसँग भेट हुँदाका पुराना दिन। कति सुन्दर लाग्थे हैन? त्यो बेला तपाई आफ्नो निकै ख्या गर्नु हुन्थ्योनी, हैन?
तपाई आफ्नो अनुहार, कपाल, ड्रेसअप जस्ता कुरामा निकै ध्यान दिनुहुन्थ्यो। जस्तो-जस्तो समय बित्दै गयो यी सबै कुरा निरस लाग्दै जानथाले। फेरी पनि तपाईले पहिले झै आफ्नो ख्यान राख्न थाल्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईको पार्टनरको ध्यान तपाईतिर तानिनले छ। र, सम्बन्धमा पुरानै महकता आउने छ।
नयाँ गर्ने हुट्हुटी
४० कट्दैमा जीवनमा आलस्य ल्याउँनु हुँदैन। आफूभित्र सधै केही गर्ने नयाँ हुट्हुटीलाई सधै जिवन्त राख्नुपर्छ। त्यसैले सधै आफ्नो श्रीमतीसँग केही नयाँ काम गर्ने कोसिस गरिराख्नुपर्छ। जसले सम्बन्धलाई सुमधुर बनाइराख्छ।
बिहेको सुरुवाति दिनमा तपाईहरू कतिधेरै काम गर्नचाहनुहुन्थ्यो। जुबेला तपाईसँग समय नै हुन्थेन। अबत समय छ। सदुपयोग गर्दै केही गर्नुस्। जेमा आफूहरूको रुची छ त्यो काम गर्दा आन्द पनि आउँछ र खुशी पनि भइन्छ।
डेट नाइटका लागि समय निकाल्ने
सधै दिनभर सँगै भएर मात्र हुँदैन। कहिले काहि डेट नाइटका लागि समय निकाल्नुपर्छ। घरमा तपाईहरू आफ्नै काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। सधैको व्यस्तताबाट समय निकाल्दै महिनाको एक दिन कुनै रमाइलो ठाउँमा गएर घुम्दा, सँगै खाना खाँदा त्यो पलनै अलग्गै आनन्ददायी हुन्छ। यसले सम्बन्धमा निकटता मात्र नभएर रोचकता नै पैदा गरिदिन्छ। साना-साना कुरामा सम्बन्धको खुशी लुकेको हुन्छ। व्यवस्थापन गर्न जाने जीवन उमेर ढल्किँदै जाँदा पनि रमाईलोसँग बिताउन सकिन्छ।
आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्ने
आफ्नो तर्फबाट कुनै गल्ती हुँदा श्रीमतीसँग माफि माग्नुपर्छ। माफि माग्दैमा कोही सानो हुने होइन। जीवनमा म जान्ने भइसके मबाट कहिले गल्ती हुँदैन ठान्नु हुँदैन।
गल्ती गर्दा स्वीकार्ने बाँनी छैन भने विवाद सिर्जना हुन्छ। र, सम्बन्धमा तिक्ता आउन थाल्छ। गल्ती स्वीकार्ने बानी गर्दा पार्टनरको नजरमा झनै सम्मान बढ्छ।